Ku saabsan Us-Yongli Warshadaha
● Ka dhig mid fudud ganacsiga Globe
Ku dadaal faa'iidada macmiilka
Ka fiirso waxa macmiilku ka welwelayo
Qiimaha macquulka ah
Qiimaha degdega ah
Isgaarsiin waxtar leh
● Si adag u shaqee, ciyaar adag ● Tayadu waa welwelka ugu sarreeya ● Iskaashiga kooxda
Ku saabsan Yongli
Yongli Industries waxay soo saartaa alaab guri oo caag ah oo silikoon OEM & ODM tayo sare leh, alaabta jikada iyo baakadahaadoo raacaya dhammaan xeerarka heerka caalamiga ah oo haysta shahaado ISO 9001, BSCI & Disney FAMA ilaa 2010.
Dhammaan alaabooyinka waxaa loo dhoofiyaa Yurub, Ameerika, Koonfur-bari Aasiya, iyo in ka badan 60 waddan iyo gobollo.
Dhammaan alaabtayada waxay la kulmaan oo ay dhaafaan dhaqamada deegaanka u saaxiibka ah. Iyada oo maamul sax ah, qalab horumarsaniyo koox xirfad leh oo R & D ah, dhammaan alaabtayada ayaa ah kuwa ugu tayada sarreeya kuwaas oo buuxiya heerarka dhoofinta Yurub.
Asalkayaga xooggani wuxuu u oggolaanayaa macaamiisheena inay arkaan muunad naqshadooda ka hor intaysan bilaabin wax soo saarka mugga.Shirkadeena waxay si joogto ah u balaadhinaysaa khadka alaabtayada markaa nagula soo xidhiidh iimaylka si aad uga hadasho naqshad kasta oo OEM ah.
Dalbashada tayada wanaagsan, qiimaha tartanka, gaarsiinta habboon, iyo feejignaanta ka dib adeegga iibka, waxaan soo dhaweyneynaa macaamiisha adduunka oo dhan.Isku day dalbashada muunad maantaKu kalsoonow inaad la xiriirtay alaab-qeybiye lagu kalsoon yahay oo karti leh.
Ka sokow, waxaan siinaa adeegyada kormeerka iyo rarida macaamiisha la tijaabiyey oo la aamini karo.Waxaan bixinaawarbixin tafatiran oo leh jawaab celin kormeeraha si loogu qanco macmiilka.
Ku saabsan adeegga maraakiibta, waxaanu bixinaa Ex-works, FOB, iyo DDP Incoterms anaga oo kugu xiraya kuwa xamuulka qaada ee lagu kalsoon yahay.Waxaan hubineynaa in si sax ah loo soo gudbiyo dukumeenti dhoofinta/soo dejinta rarida xamuulka taasoo keentay in si habsami leh loo gaarsiiyoalaabada meesha loo socdo iyada oo aan dhib lahayn.
Dhammaan dalabaadka OEM si heer sare ah ayaa loo soo dhaweeyay. Si diiran u soo dhawoow dhammaan macaamiisha cusub iyo kuwii hore si ay u sameeyaan su'aalo oo na soo booqdaan.
Mas'uuliyadda bulsheed iyo anshaxeed ayaa saldhig u ah wax kasta oo aan sameyno.
Waxaan aaminsanahay in samaynta alaab tayo wanaagsan aysan u baahnayn inay ku timaado kharashka dadka kale.
Waxaan runtii danaynaynaa halka alaabtayadu ka timaado iyo xaaladaha lagu soo saaro.
Agaasimaha Suuqgeynta & Iibka
T1 - Maareeyaha Mashruuca
T2 -Maareeyaha Mashruuca